France Archive - Gool FM - page 2	twitter
“Shaki iigama jiro inaan garaacayno PSG” – Luis Enrique
(Barcelona) 07 Maarso 2017 Tababaraha kooxda Barcelona ee Luis Enrique ayaa niyada u dhisay taageerayaasha kooxdiisa ka hor kulanka habeen dambe ay marti qaadi doonaan kooxda PSG.
Luis Enrique ayaa sheegay in shaki uusan uga jirin in kooxdiisu ay guul ka gaari doonto dhigeeda PSG oo lugtii hore uga soo adkaatay 4-0.
46 jirkaan ayaanse hubin in kooxdiisu ay soo gudbi karto laakiin wuxuu rajo ka muujiyay in haddii kooxdiisu ay sifiican u ciyaarto ay awoodo inay soo baxdo.
“Waan rumaysanahay shakina iigama jiro inaan 
Goolkii Radamel Falcao oo loo doortay kii usbuuca ee Champions League…. (Yaa la tartamayay?)
(Yurub) 06 Maarso 2017 – Goolkii uu ka dul qaaday goolwalaha Man City weeraryahanka kooxda Monaco ee Radamel Falcao ayaa loo doortay goolka usbuuca ee Champions League.
Dhaliyaha kooxda Monaco ayaa kaalin wayn ku lahaa kulankii siddeeda gool la iska dhaliyey ee ka dhacay garoonka Etihad, kaasoo kooxda Ligue 1 ugu dambayn looga adkaaday 5-3, waxaana goolka usbuuca ee Champions League noqday kii uu Falcao sida xirfadeysan uga dul qaaday goolhayaha Man City.
Xiddiga xulka qaranka Colombia ayaa goolkiisa waxaa la tartamayey 
“Barcelona sooma kabsan karto kulanka PSG” – Jese Rodriguez
(Paris) 06 Maarso 2017 Laacibka amaahda uga maqan kooxda PSG ee Jese Rodriguez ayaa saadaaliyay in kooxdiisu ay u gudubtay wareega 8-da isla markaana Barcelona aysan soo laaban karin.
PSG ayaa 4-0 uga soo adkaatay Barcelona lugtii hore, kooxda reer Spain ayaana haatan isku dayeeysa sidii ay uga soo kabsan lahayd goolashii laga dhaliyay.
Laakiin Jese Rodriguez ayaa rumaysan in Barcelona aysan ka soo laaban karin goolashii 4-0 ee ay kala kulantay PSG kulankii lugtii hore.
“Waxaan rumaysanahay in Barcelona aysan lahayn awood ay ku soo 
Ibrahimovic oo gaaray dalka Faransiiska xilli uu maanta ogaanayo inuu wajihi doono Ganaax iyo inkale
(France) 06 Mar 2017. Zlatan Ibrahimovic ayaa gaaray dalka Faransiiska kaddib markii uu usbuuc adag la qaatay kooxda Man United.
Ibra ayay u badan tahay in goor dambe maanta uu ogaan doono inuu wajihi doono talaabo anshaxa ah kaddib xusulkii uu ku dhuftay Tyrone Mings kulankii Premier League ay bar-baraha 1-1 la galeen kooxda Bournemouth.
Dhaliyaha reer Sweden ayaa dafiray inuu si ula kac ah suxulka ugu dhuftay Mings wuxuuna ciyaarta kaddib wareysigiisa ku sheegay in TV-yada iyo sawirada laga arki karo isla 
“Riyadaydu waa inaan Champions League la qaado PSG” – Marco Verratti oo hadlay ka hor kulanka Barcelona
(Paris) 06 Maarso 2017 Laacibka qadka dhexe ee kooxda PSG Marco Verratti ayaa soo bandhigay riyadiisa oo ah inuu koobka horyaalada yurub kula guulaysto kooxdiisa.
Xiddigaan ayaa lala xiriiriyay kooxaha ka dhisan Spain iyo talyaaniga laakiin wuxuu sheegay inuu doonayo inuu iska sii joogo PSG.
Wuxuuna intaa ku daray in riyadiisu ay tahay inuu Champions League la qaado kooxdiisa PSG, xili arbacada ay u safrayaan kooxda Barcelona oo lugtii hore ay uga soo adkaadeen 4-0.
“Waxaan doonayaa inaan la sii joogo PSG, waxaan ahay qayb 
Didier Deschamps oo mugdi galiyay mustaqbalkiisa xulka France
(Paris) 03 Maarso 2017 Tababaraha xulka qaranka Faransiiska ee Didier Deschamps ayaa mugdi galiyay mustaqbalkiisa xulka marka uu soo idlaado qandaraaskiisa.
Qandaraaska Didier Deschamps ee xulka France ayaa ku eg marka uu soo idlaado koobka aduunka ee 2018 lagu qaban doono dalka Ruushka.
Wuxuuna sheegay in haatan uu ku dadaalayo sidii xulkiisu uu ku gaari lahaa koobka aduunka ee 2018, isaga oo intaa ku daray in kadib uu ka fikiri doono halka uu u dhaqaaqayo.
“Kama fikirayo mustaqbalkeyga iyo tilaabta xigta ee aan qaadayo kadib 
Grzegorz Krychowiak oo ka caraysan xaalkiisa kooxda PSG
(Paris) 03 Maarso 2017 Laacibka reer Poland ee kooxda PSG ayaa muujiyay sida uu uga caraysan yahay xaalkiisa haatan ee kooxda ka dhisan caasimada faransiiska.
Grzegorz Krychowiak ayaa ka soo dhaqaaqay kooxda Sevilla suuqii xaggaaga isaga oo horay u soo raacay tababare Unai Emery laakiin wuxuu ku fashilmay inuu boos joogto ah ka helo kooxdiisa cusub.
27 jirkaan ayaa sheegay inuu ka caraysan yahay xaalkiisa kooxda PSG balse taasi aysan ku riixi doonin inuu dalbado in la fasaxo dhamaadka xiliciyaareed kan.
“Waxaan ku suganahay 
Sanad iyo Saddex bilood kaddib Benzema oo lagu soo celinayo xulka Qaranka Faransiiska
(Paris), 01 Maarso 2017 –Cajalkii fadeexadda ahaa ee laga duubay Karim Benzema iyo Mathieu Valbuena ee sababta u noqday in Weeraryahanka Real Madrid uu xulka Faransiiska ka maqnaado muddo sanad iyo saddex bilood ah ayaa arrintaasi haatan la soo geba gebaynayaa.
Tababaraha xulka Faransiiska Didier Deschamps oo la hadlayay wargeyska ‘Le Parisien’ ayaa shaaca ka qaaday in Benzema laga khafiifiyay ciqaabtii saarnayd dibna ugu soo noqon doono xulka Le Blues.
“Waxaan aaminsanahay in ay xulka u wanaagsan tahay in ay dib ugu yeeraan 
(Paris), 27 Feb 2017 –Sida uu qoray Wargeyska ‘The Sun’ ee ka soo baxa Ingiriiska waxaa mas’uuliyiinta Paris Saint German ee Faransiisku ay qorsheynayeen in ay ciyaaryahan Angel Di Maria ka iibiyaan Horyaalka Shiinaha ka hor wacdarihii uu ka dhigay lugtii hore ee wareegga 16′ ee Koobka Horyaallada Yurub ciyaartii ay PSG 4-0 ku xasuuqday Barcelona.
Wararku waxay sheegayaan in PSG ay u sheegtay Wakiilka Di Maria, Jorge Mendes in uu laacibka u bandhigo suuqa kooxaha Bariga Fog, waxaana Di 
Naadiga Bastia oo la ciqaabay kaddib taageerayaashooda oo jinsi faqooqay Mario Balotelli
(France) 24 Feb 2017. Guddiga anshaxa ee horyaalka Ligue 1 ee dalka Faransiiska ayaa ganaaxay naadiga Bastia kaddib markii ay taageerayaashooda fal cunsurinimo ah kula kaceen dhaliyaha kooxda Nice Mario Balotelli.
Hal dhibic ayaa laga jaray Bastia kaddib taageerayaashooda oo bartilmaameed ka dhigtay wiilka madoow ee heysta dhalashada Talyaaniga kulankii ay 1-1 la galeen Nice bishii Janaayo.
Waxaa sidoo kale lagu amray inay saddex kulan xiraan dhanka bari ee garoonkooda kulamada ay marti galiyayaasha yihiin.
Mario Balotelli ayaa qudhiisa la ganaaxay labo kulan 